We.com.mm - သင့်အသားအရေကိုပျက်စီးစေတဲ့ အချက်(၁၀)ချက်
လူတိုင်းကကိုယ့်မျက်နှာအလှကိုပဲ ဦးစားပေးပြီးပြင်ဆင်ကြပါတယ်… ။
မျက်နှာအသားအရေဆိုတာ သေချာဂရုစိုက်နိုင်မှ ကောင်းမွန်လှပတဲ့အသားအရေကို ရရှိမှာပါဖြစ်ပါတယ်… ။
နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေရဲ့ မှားယွင်းတဲ့အချက်တွေက သင့်အသားအရေကို ပိုပျက်စီးစေတာကိုရော သတိထားမိကြရဲ့လား ?
သင်က Hairspary ကိုအသုံးပြုတဲ့သူတစ်ယောက်လား? ဆံပင်ကိုပုံစံကျပြီးလှပနေအောင်ပြုလုပ်ရာမှာ Hairspary က မပါမဖြစ်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Hairspary မှာပါဝင်တဲ့ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေက သင့်မျက်နှာအသားအရေကို ပျက်စီးစေတယ်ဆိုတာရောသတိထားမိရဲ့လား။ နောက်တစ်ခါ သင်Hairspary သုံးတော့မယ်ဆိုရင် သင့်မျက်နှာကိုအရင် ကာကွယ်ပြီးမှ Hairspary ကိုဖြန်းပေးသင့်ပါတယ်…
ကလိုရင်းက ရေကူးကန်ထဲမှာဘက်တီးရီးယားတွေကို သန့်စင်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုရပါတယ်။
အဲဒါကသင့်အသားအရေကို ပျက်စီးစေပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ သင်ရေကူးကန်သွားပြီးတဲ့အခါမှာ သန့်တဲ့ရေနဲ့ ပြန်ဆေးပြီး သင့်အသားအရေအတွက်ကောင်းတဲ့ ဆပ်ပြာအမျိုးအစားကို အသုံးပြုပေးပါ…။
ကော်ဖီမကြိုက်တဲ့သူဆိုတာမရှိပါဘူး။ ကော်ဖီကအသားအရေကို ပျက်စီးစေတယ်ဆိုရင်တော့ ဝမ်းနည်းစရာပါပဲ။
ကော်ဖီမှာ ကဖင်းဓာတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ ကဖင်းဓာတ်က စိတ်ကိုနိုးကြားစေပြီး လန်းဆန်းစေပါတယ်… ။
ဒါပေမယ့် ကဖင်းဓာတ်က အသားအရေကိုခြောက်သွေ့စေနိုင်ပါတယ်။ သင်ကလည်းကော်ဖီကို စွဲစွဲလမ်းလမ်းကြိုက်တဲ့သူဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
ကော်ဖီသောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ ရေဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးတဲ့အနေနဲ့ ရေတစ်ခွက် ဒါမှမဟုတ် အရည်ရွှမ်းတဲ့ အသီးအနှံမျိုးကိုစားပေးသင့်ပါတယ်…။
(၄) မိတ်ကပ်မဖျက်ပဲ အိပ်မိတဲ့အခါ
တစ်ခါတလေမှာ အရမ်းပင်ပန်းပြီး ညဘက်အိပ်ခါနီးမှာ မိတ်ကပ်မဖျက်မိတာတွေရှိတတ်ပါတယ်…။
ဒီလိုအခါမှာ သင့်ခေါင်းအုံး၊ အိပ်ယာခင်းတွေမှာရှိတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေက သင့်မျက်နှာပေါ်မှာ ဝက်ခြံတွေဖြစ်စေပါတယ်။ သင်ပင်ပန်းပြီး မိတ်ကပ်မဖျက်မိတဲ့အခါမျိုး မဖြစ်ရအောင် သင့်အိပ်ယာနားမှာ မိတ်ကပ်ဖျက်တဲ့ တစ်ရှူးကိုဆောင်ထားသင့်ပါတယ်…။
ရေနွေးနဲ့ရေချိုးတယ်ဆိုတာ ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းပါပဲ… ။ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့အခါမှာ ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ရေချိုးပါကသက်သာစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ အကြာကြီးရေချိုးတဲ့အခါ သင့်အသားအရေ ကိုခြောက်သွေ့ ပျက်စီးစေပါတယ်…။
သင့်မျက်မှန်ကလည်း ဘက်တီးရီးယားတွေများစွာ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။အဲဒါတွေက သင့်မျက်နှာကို ဝက်ခြံထွက်လာစေနိုင်ပါတယ်…။အဲဒါကြောင့် သင့်မျက်မှန်ကို နေ့စဉ် သန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်…။
မကြာခဏ waxing လုပ်တာကလည်း သင့်အသားအရေကိုပျက်စီးစေပါတယ်။ ၃ပတ်တစ်ခါလောက်မှ Waxing လုပ်တာက သင့်အသားအရေအတွက် ကောင်းပါတယ်…။
စိတ်ဖိစီးမှုများတာက ဘယ်အရာအတွက်မှ မကောင်းစေပါဘူး… ။ စိတ်ဖိစီးမှုများလာရင် သင့်မျက်နှာကို အရေးအကြောင်းတွေ ပေါ်လာစေပါတယ်… ။ သင်စိတ်ဖိစီးမှုများနေတဲ့အခါမှာ သီချင်းနားထောင်တာ၊ စာအုပ်ဖတ်တာစတဲ့ စိတ်ငြိမ်စေမယ့်အရာများကို လုပ်ဆောင်ပေးပါ…။
အဲကွန်းနဲ့အကြာကြီးနေတာကလည်း သင့်အသားအရေကိုခြောက်သွေ့ပြီး ပျက်စီးစေပါတယ်… ။ ဒီလိုအခါမှာ သင့်အသားအရေကို ချောမွေ့အောင် အစိုဓာတ်ပါတဲ့ Lotion လိမ်းထားပေးသင့်ပါတယ်…။
အရက်သောက်ခြင်းက ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်စေတာကြောင့် သင့်အသားအရေကိုခြောက်သွေ့စေပါတယ်။
12 months ago by Elsa
မင်းထက်ကောင်းတဲ့သူတောင် မင်းလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ချီးကျူးလိုက်တဲ့ မြန်မာပြည်သိန်းတန်
5 months ago by Mizzy Reba
သမီးလေးအတွက် အားပေးစကားပြောလိုက်တဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ မိခင်
1 days ago by Sora
ဖုန်းကာဗာအကြည်လေးရှိရုံနဲ့ သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ဖုန်းကာဗာဒီဇိုင်း (၅) မျိုး